Muranka siyaasadeed ee maamulka Somaliland oo maraya meel xasaasi ah. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 3, 2009 12:00 b 0
Hargeysa, Aug 03 – Waxaa maalinba maalinta ka danbaysa sii kululaanaya muranka siyaasadeed ee ka dhax aloosan xisbiyada Somaliland, gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah iyo midka talada haya oo isla meel dhigi la’ hawlo farsamo oo la xiriira qabashada doorashooyinka.
Is-maandhaafka hadda taagan ayaa soo ifbaxay kadib markii guddiga doorshooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen maanta oo isniin ah in ay ololaha doorashadu ka bilaaban doono gobollada Maamulka Somaaliland, xilli lagu muransan-yahay diiwaan-galinta dadka reer Somaliland.
Go?aankaasi guddiga doorashooyinka Somaliland, ayaa waxaa ku gacan-sayray labada xisbi ee mucaaradka ah ee Kulmiye iyo UCID oo sheegay in aysan ka qeyb noqon doonin doorasho diiwaan-galin la?aan ah, halka xisbiga taladaha haya ee UDUB-na uu soo dhaweeyey go?aankaasi guddiga doorashooyinka isla markaana uu aqbalay.
Guddoomiyayaasha Xisbiyada KULMIYe iyo UCID Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaan) iyo Faaysal Cali Waraaabe, oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go?aanka kalinimada ah ee ay soo saareen guddiga doorashooyinku, waxayna intaasi ku dareen in aysan wax talo ama tusaale ah ku lahayn go?aanka ay guddigu gaareen.
Guddoomiyayaashu, waxay guddiga ku eedeeyey in ay la safteen xisbiga talada haya ee UDUB laakiin aysan fiirin danta bulashada reer Somaliland iyo fikirka ay qabaan xisbiyada mucaaradku, waxaayna go?aan ku gaareen in aysan ka qeyb galin ololaha doorashada ee loo asteeyey maanta oo ay taariikhdu tahay 03/Aug/2009.
Dhowr jeer oo hore ayaa dib udhac ballaarani ku yimid xilliga qabsoomidda doorashada nadaxtinimada Soomaaliland, taasi oo uu ka dhashay is qab-qabsi iyo sii kala fogaansho xisbiyada dhaxdooda ah.
14 Apil 2008-da ayey ahayd markii la filayey Somaliland in ay si rasmi ah uga dhacdo doorashada madaxtimadu, laakiin arrintaasi waa ay qabsoomi weyday sababo micno kala duwan loo yeelay, waxaana xilligaasi muran badan kadib golaha guurtidu muddo lix bilood ah ku dareen wakhtiga jiritaan madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa, muddadaasi ayaa iyana markii ay dhammaatay ay suurto-galin weyday in la qabto doorashadii madaxtiminada, waxaana dhowr jeer oo danbe dib loo dhigay xilliga doorashada.
Golaha guurtida Somaliland oo ahaa marjaca ugu weyn ee loo-laabto marka ay yimaadeen muranno noocaan oo kale ah ayaa laftigoodu la kala safan Xisbiyada mucaaradka iyo midka talada haya.
Sikastaba ha?ahaatee shacabka reer Somaliland ayaa si weyn uga walwalsan halka ay arrintu ku danbayn-doonto, waxayna ka cabsi qabaan in khal-khal ku yimaado ammaanka gobollada Somaliland.
C/fitaax Cumar Geeddi